Naya Post Nepal | चितामा राखेको शव एकैछिनमा जब चल्न र छटपटाउन थाल्यो, मलामी गएका पनि भन्न थाले राम राम ! (भिडियो सहित)
चितामा राखेको शव एकैछिनमा जब चल्न र छटपटाउन थाल्यो, मलामी गएका पनि भन्न थाले राम राम ! (भिडियो सहित)
भारतको राजधानी दिल्लीमा एक अ’नौ’ठो घ’ट”ना भएको छ। मृत ठानिएको व्यक्तिलाई अन्तिम संस्कार गर्न लगिएको थियो। तर चितामा राख्नै लाग्दा उक्त वृद्ध जिवित पाइएको हो।
जिन्युजका अनुसार धेरैबेर सास बन्द भएपछि ती वृद्धलाई अन्त्येष्टीको लागि शवदाह गृह लागिएको थियो। तर उनको शरीर चल्न थालेपछि मानिसहरु अचम्ममा परेका थिए, केही त त्रसित नै भए।
अधिकारीहरुका अनुसार ती वृद्ध सुरुवातमा अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। तर आर्थिक अभाव भएपछि परिवारले वृद्धलाई अस्पतालबाट डाक्टरको सल्लाह बिपरित डिस्चार्ज गराए।
घरमा राखेको केही दिनपछि वृद्धको सास बन्द भएको थियो। सोही क्रममा मृत्यु भएको ठानेर उनलाई अ’न्त्ये’ष्टी’को लागि लगिएको थियो। हाल वृ’द्धलाई अ’स्पता’ल भर्ना गरिएको छ र जिवित उनको उपचार चलिरहेको छ। -etajakhabar.com
अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हुआ शख्स | @NeerajGaur_ #Delhi pic.twitter.com/KFMng5Wc93
२०७८ पुष १८, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 155 Views